ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ချစ်သော ဖေဖော်ဝါရီ
ဒီအချစ်သစ်ပင်လေးက အရွယ်မတိုင်မှီ ညှိုးနွမ်းခဲ့ရ ။
အချစ်တစ်ခုတည်း နဲ့ မလုံလောက်တာကို
ချစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ က သင်ပေးခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့်လေ ပေးခဲ့တာနဲ့ မတန်အောင်
ကြေကွဲခြင်း ၊ နာကျင်ခြင်း ၊သိမ်ငယ်ခြင်း ၊
မာနရဲ့ နောက်ဆက်တွဲနဲ့ မုန်းလို့မရတဲ့ နာကျင်ချစ်ခြင်းတွေပါ ။
တို့တွေ ငိုသော မျက်လုံး ပြုံးနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့
နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားတွေ ပြိုင်တူ ဆိုမိကြတယ်
“လွမ်းနေပါ့မယ် ” တဲ့
မင်းကိုငါ မုန်းမေ့ချင်တယ် “ဖေဖော်ဝါရီ ” ။
အလို တယ်နုနေပါ့လား..း)).. မုန်းပစ်လိုက်ပါ.. မုန်းချင်ရင်... :p
(ဒါနဲ့ တို့တွေက တစ်နှစ်တည်းမွေးကြတယ်နော်..း))) )
ဖေဖွာယီ ကိုးရက် ၊ ဆိုးချက်က ရင်နင့်စရာ
မဲဆောက်ကို သွားခဲ့..၊ မွဲခြောက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ .
ရေးသူ အမည်မဖော်လိုသူ မစဒက
ကံကောင်းလိုက်ကြတာ မွေးနေ.ကိုမှတ်မိတဲ. သူငယ်